Malunga - BikeHike
Ngaba uyazithanda iibhayisekile, ukhenketho lokukhwela ibhayisekile kunye nohambo ngebhayisekile?
Ingcamango yewebhusayithi - iiblogi
I-BikeHike liqonga apho mna, umthandi webhayisekile kunye nokhenketho lokuhamba ngebhayisikile ngokukodwa, ndabelana ngolwazi oluluncedo kwizihloko ezifanayo.
Kwangaxeshanye, umbono wesiza kukuvumela abantu abanomdla ofanayo ukuba bamanyane, banxibelelane kwaye babelane ngolwazi ikakhulu ngeeblogi.
Lo ngowona mahluko uphambili kwiiforamu, apho kungekho misebenzi ilungileyo yokuzibonakalisa, apho unokwenza isihloko, ungazikhupha kuso, kodwa konke oku kuya kusasazeka kwiindawo zayo ezivulekileyo. Nathi, zonke iingcinga zakho kunye nemibono yexesha elimnandi iya kugcinwa kwindawo enye. Unendawo yakho yobuqu, onokuthi ufuna ukwabelana ngayo nabanye, umzekelo, ngokunika ikhonkco kumhlobo, okanye ufuna ukuyishiya wedwa nawe. Ndapheka iti, ndathatha iibhanzi, kwaye ngexesha elibandayo lasebusika uyakhumbula indlela owawunexesha elimnandi ngayo ehlotyeni. Ugalele i-cola emkhenkceni ngemini eshushu yasehlotyeni kwaye uhlaziyeke njengoko ufunda ama-adventure akho asebusika.
Olu luhlobo lwedayari yomntu, lufakwe kuphela kuluntu lwabantu abanengqondo efanayo, ngenxa yokuba luya kufumana impendulo ephilileyo.
Ukwenza oku, kufuneka nje ubhalise, emva koko ungaqala ibhlog yakho.
Ukulungiselela uhambo lwebhayisekile
Isayithi iqulethe ulwazi oluthi, ekuqaleni, lukukhuthaza ukuba uhambe uhambo lwakho lokuqala lwebhayisikile, kwaye ikuxelela indlela yokuyilungiselela. Apha uya kufunda ukuba yeyiphi indlela yebhayisekile omawuyithathe, into omawuyithathe nawe, uyipakishe njani, uyithutha njani ibhayisekile yakho, ukupheka ntoni, njl.
Asiyi kuwutyeshela umba wokukhetha ibhayisekile kunye namanye amacandelo, izixhobo, izixhobo. Umzekelo, yeyiphi ikhamera engcono ukuthatha uhambo? Nalapha kuninzi ekufuneka kuxoxwe.
Qhubeka. Ukuze ukuhamba ngebhayisikili kube luncedo kwaye kungabi yingozi kwimpilo, kufuneka uziqhelanise nobugcisa bokuhamba ngebhayisikili, khetha ubungakanani bebhayisikili kwaye wenze ukulungelelanisa okuchanekileyo.
Ewe, kufuneka ukwazi ukulungisa ibhayisekile ngezandla zakho, uyigcine kwaye uyikhathalele. Amanqaku ethu aya kukunceda ufumane ubuchule obunjalo.
Ukuba uyayithanda indawo, ukuba ubona ithemba ekuphuhlisweni koluntu lwabalandeli bemisebenzi yangaphandle, iibhayisikili, ukhenketho lokuhamba ngebhayisikili kunye nokuhamba ngebhayisikili, emva koko ujoyine, umeme abahlobo, ushiye ikhonkco kwindawo, apho kunokwenzeka, kwaye emva koko singakwazi. phuhlisa ngokukhutheleyo, yandisa indlela yokuphila enempilo, ewe kwaye nje "ubomi buya kuba ngcono, ubomi buya kuba mnandi ngakumbi"
Konke okuhle kunye nethamsanqa!